ဘဝသည်​ဂိမ်းကစားခြင်း — Steemkr
အတော်များများကပညာရှိသသောလူဘဝကိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျော်ပြောပါတယ်။ သူတို့ကဒီကြေညာချက်အားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝတစ်ဇာတ်ကြောင်း၌ဤယုံကြည်ချက်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ မျှော်လင့်, ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှတဆင့်ဒီဒဿနဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံအဲဒါကိုဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်: ကိုသူတို့ဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လျှင်အဖြစ်ဖန်တီးမှုအလုပ်, အဆောက်အဦဇာတ်ကောင်များနှင့်သာမန်တာဝန်များကိုကုသ။
သငျသညျကိုဘယ်လိုဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပွားသို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်အဆင့်ဆင့်ကိုတက်အချို့သောလုပ်ငန်းများကိုဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံအချို့ပမာဏကိုရရှိမှုများကသိသလော ကောင်းပြီ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါဒီစနစ်ဆင်တူသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအလုနီးပါး 10 နှစ်တလျှောက်လုံးကျွန်မရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့နေ့တိုင်းဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့ကြသည်။ ငါနေ့တိုင်းငါ့အဖန်တီးမှုခွက်ကိုအာရုံစိုက်အသုံးပြုပုံငါအတွေ့အကြုံ, ဗဟုသုတ, နှင့်ဖန်တီးမှုရလာဒ်များငါ့အဆင့်ကိုပြုစုပျိုးထောင်အတွက်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုရရှိနိုငျကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငါ့အဘို့, က, ငါဒေသန္တရ play သည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီနေ့ကရောက်ရှိအသစ်အဘယ်အရာကိုအဆင့်ကိုကြည့်ရှုမနာသီချင်းဆိုနှင့်ရေးသားဖို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသုံးပါးဖန်တီးမှုတာဝန်များကိုအတူတိုးတက်မှုငါတစ်ဦးတည်းသာတာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလျှင်ထက်ပိုတဖြည်းဖြည်းသော်လည်းတိုးတက်မှုနေဆဲသိသာနှင့်လှုံ့ဆျောဖြစ်ပါတယ်။ ငါနေ့တိုင်းငါဖန်တီးမှုစုံလင်၏ချက်များမရရှိပန်းတိုင်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားနေပါတယ်ခံစားရတယ်။ ငါကျနော်တို့အဲဒီမှာကြောင့်အနုပညာအကြောင်းကိုသိရန်သည်နှင့်ငါတို့သည်ပွဲချင်းပြီးကြဖို့အရေးကြီးနေသည်အရာအားလုံးလုပျနိုငျအရာရာကိုသိဆိုလိုပေသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ဦးဖန်တီးမှုအနုပညာကိုကျွမ်းကျင်မနိုင်အဖြစ်ချက်များမရရှိဟုဆိုသည်။ ကိုယ့်အချို့ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာလိုပဲပင်ထိပ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိပြီးနောက်အသစ်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိရန်, ရရှိတွေ့ကြုံခံစားစုဆောင်းရန်အသစ်သောပစ္စည်းများနှင့်သော့ဖွင့်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှိနေတုန်းပဲ။
ဇာတ်ကောင်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါမကြာခဏဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ "ကျွန်တော်တို့ကိုငါသည်ငါ့ဇနီးနှင့်အတူယနေ့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလူနာကြည့်ရှုပါစို့။ ", နံနက်ယံ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာမည်နံနက်အပြင်, ငါလိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, ထိုနေ့ရက်တလျှောက်လုံးဒီဂိမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။ နေ့ရက်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ဦးအောင်ကြိုးစားနေအများအပြားတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ဖိစီး၏မျက်နှာကိုအတွက်လုပ်ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဂိမ်းအဖြစ်ဇာတ်ကောင်များ၏အဆောက်အဦဆက်ဆံပါလျှင်သို့သျောလညျး, ပြီးတော့ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုပေါ့ပါးကြောင်းစဉ်းစားသို့ကိုယျ့ကိုယျကိုလှည့်စားနိုင်ပါတယ်။ ဤ "လှည့်ကွက်" ဇာတ်ကောင်များ၏အဆောက်အဦတစ်ခုပျော်စရာအတွေ့အကြုံကအောင်ထက် Boot တက်စခန်းများကဲ့သို့ခံစားဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အကြီးမြတ်ဆုံးဒြပ်စင်သည်သင်အနီးကပ်လူအပြုသဘောထုံးစံ၌သင်တို့၏အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်ပုံကိုမြင်နေသည်။
ထိုကဲ့သို့သော, ကြမ်းပြင်လောကထဲကလူတော်တော်များများဟာမေးလ်ဖွင့်ကောက်နေ, သင်၏အခန်းကိုဖွင့်သပ်ရပ်သန့်ရှင်းအဖြစ်သာမန်တာဝန်များကို, နျပငျပနျးပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဂိမ်းသို့ထိုကဲ့သို့သောတာဝန်များကိုစေလျှင်သို့သော်သူတို့ပင်ပျော်စရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်မိနစ်ရေချိုးနိုင်ပါတယ်မည်မျှဟင်းလျာများတွေ့နိုင်ပါသည်, ထိုဟင်းလျာများကိုလျှော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပါ။ သင်အမြင့်မားဆုံးရမှတ်ရိုက်နှက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုရန်ဤ နေရာမှာပြန်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်အကြိုက်ဆုံးဂီတအချို့ကိုအပေါ်ချပြီးလည်းဖြစ်စဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည် ဂိမ်းသန့်ရှင်းခံရဖို့တခြားဘာမှမရှိဘူးသေချာစေရန်ငါအတတျနိုငျဆုံးတစ်ခုခုရှင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ငါတစ်ခုခုရနိုင်ပုံကိုစင်ကြယ်သောမြင်ချင်တာပေါ့။ အခန်းထဲမှာ၏အမှု၌ငါသည်ထိပ်ကနေအောက်ခြေငါ့အခန်းထဲသန့်ရှင်းရေးတစ်ပါတ်အဘို့နေ့ရက်တိုင်းနာရီပေါင်း။ ဒါဟာဝေးဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာပစ်ခြင်းငှါအရာအားလုံးသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်သပ်ရပ်စေရန်, တဖန်အသစ်ကဖြစ်လာအခန်းထဲမှာသက်သေခံပါးခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့အခန်းထဲဖြစ်လာနိုင်ပုံကိုစင်ကြယ်သောကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်။ ကျနော်တို့သာမန်အခြို့သောတာဝန်များကိုခေါ်သော်လည်း, သူတို့သည်တကယ်တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်လန်းဆန်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ စာရေးဆရာနှင့်အယ်ဒီတာသကဲ့သို့ငါ၏အမှု၌ငါမကြာခဏကြောင်းတဝိုက်ကိုရွှေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းမရကြဘူး။ ကျွန်မ ပို. ပင်လေ့ကျင့်ခန်းခံရပါလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းအတွက်ရွေ့လျားထွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လမ်းအတိုင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုများဆက်ဆံပါ။
အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအတွေးအခေါ်ရကုန်အံ့။ ကျနော်တို့ဘာမျှမနှင့်အတူဤလောကသို့ လာ. , လည်းငါတို့နှင့်အတူယူဘာမျှမထားခဲ့။ ကြွင်းသောအရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: ကျွန်တော်အနေနဲ့စံပြဆီသို့ဦးတည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးအပေါ်ရနိုင်ပုံကိုဝေးကြည့်ဖို့ဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီး။ ငါတို့သည်ဖန်တီးမှုအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်တည်ဆောက်နှင့်သာမန်တာဝန်များကိုဖြည့်စွက်စေခြင်းငှါသော်လည်းအဆုံးရလဒ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်: ကျွန်တော်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူယူဘာမျှမနှင့်အတူဤလောက၏စွန့်ခွာ။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့ကိုနောက်ကွယ်မှနေတဲ့ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုထားခဲ့ပါ: ငါတို့လုပ်ရပ်တွေ၏အမှတ်တရများ, ဆွေးနွေးချက်များနှင့်အလုပ်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ငါတို့အခြားသူများ (မျှော်လင့်) ခံစားနိုင်ပါတယ်သောအရာကိုထားခဲ့သာတူရိယာဖြစ်ကြသည်။ အသက်ရှည်သငျသညျတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ကအဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘဝအသက်တာ၌ပြုကြပြီအပြုသဘောလမ်းအတွက်အခြားသူများကိုသာသက်ရောက်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကြောင်းအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကြောင်းကိုဤမျှလောက်ဘူး။
esteem artzone wafrica life game